အစာအိမ်ရောဂါအမျိုးမျိုးအတွက် ပျောက်ကင်းသွားစေမယ့် မြန်မာ့ရိုးရာဆေး
By Writer MagicPosted on April 16, 2021
အစာအိမ်ရောဂါအမျိုးမျိုးအတွက် ပျောက်ကင်းသွားစေမယ့် မြန်မာ့ရိုးရာဆေး အစာအိမ်ရောဂါအမျိုးမျိုးနဲ့ အစာမကြေ ရင်ပြည့်ရင်ကယ် စတာတွေအတွက်ဆေးကောင်းတစ်လက်ကို မျှဝေပေးလိုက်ရပါတယ်… အစာအိမ်သမားများ အစာမကြေ၊ ရင်ပြည့်ရင်ကယ်၊ အစားစားပြီးတိုင်း အောင့်ခြင်းစသည်ဖြင့် အမျိုးမျိုးဖြစ်ရကာပျို့အန်ခြင်း၊ သွေးဝမ်းသွားခြင်းပင် ဖြစ်တတ်ပါသည်။ ထိုဝေဒနာများ မခံရအောင် နည်းကောင်းလေးတင်ပြအပ်ပါသည်။ (၁) […]
ခေါင်းလျှော်ရည်ထဲ ဆားထည့်လျှော်တဲ့အခါ ရလာမယ့်ကောင်းကျိုးတွေ
မီးဖိုချောင်မှာ အမြဲတမ်းလိုလိုရှိနေတဲ့ဟင်းချက်စရာတွေအတွက် အသုံးဝင်တဲ့ဆားဟာ မထင်မှတ်ပဲ ဆံပင်အတွက်ပါ အသုံးဝင်တဲ့အလှကုန်ပစ္စည်းဖြစ်လာခဲ့ပါပြီ။ ခေါင်းလျှော်ရည်ထဲကို ဆားအနည်းငယ်ထည့်လျှော်ပေးသင့်တယ်ဆိုတဲ့ အလှအပဆောင်းပါးတစ်ခုကိုတွေ့ခဲ့လို့ ပရိသတ်ကြီးအတွက် အလှအပဗဟုသုတအနေနဲ့ ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ ခေါင်းလျှော်ရည်ထဲဘာလို့ဆားထည့်ပေးသင့်တာလဲ? ဆားက သဘာဝဖြစ်တဲ့အတွက်ဘေးဥပါဒ်ဖြစ်မှာလည်းလုံးဝမစိုးရိမ်ရပါဘူး။ခေါင်းလျှော်ရည်ထဲကို ဆားစားပွဲတင်ဇွန်း ၂ဇွန်းစာလောက်ရောထည့်ပြီးလျှော်ပေးတာက… အဆီပြန်ခြင်းကိုကာကွယ်ပေးတယ် ခေါင်းလျှော်ရည်ထဲဆားထည့်လျှော်ပေးတာက ဦးရေပြားအဆီပြန်ခြင်းကို […]
မိန်းကလေးတွေ ဝေးဝေး ရှောင်သင့်တဲ့ ယောင်္ကျားညံ့ ( ၆ ) မျိုး
မိန်းကလေးတွေ ဝေးဝေး ရှောင်သင့်တဲ့ ယောင်္ကျားညံ့ ( ၆ ) မျိုး ဘယ်လောက်တောင်ပဲ လန်းနေနေ၊ မိုက်နေနေ လုံးဝ မပတ်သင့်တဲ့ ယောင်္ကျားမျိုးတွေ ရှိပါတယ်။ ကိုယ့်အနားမှာ ဒီလို လူမျိုးတွေက မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်းအဖြစ် […]
သူငယ်ချင်းဖြစ်သူ ရဲတိုက်ကိုအိမ်မက်မက်ခဲ့တဲ့အကြောင်း စိတ်မကောင်းစွာ့ပြောပြလာခဲ့တဲ့ နှိုင်းယှဉ်မြင့်မိုရ်…..
By Writer MagicPosted on April 16, 2021 April 16, 2021
ပရိတ်သတ်ကြီးရေ…ဖေဖော်ဝါရီလအစပိုင်းကတည်းက ပြည်သူလူထုတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြတဲ့ နွေဦးတော်လှန်ရေးတိုက်ပွဲကြီးမှာ ပြည်သူလူထုနဲ့အတူ အနုပညာရှင်များစွာကလည်း လူထုလှုပ်ရှားမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်..။ဒီလိုလှုပ်ရှားမှုတွေပြုလုပ်နေကြတဲ့အထဲမှာ သရုပ်ဆောင် နှိုင်းယှဉ်မြင့်မိုရ်နဲ့ မင်းသားရဲတိုက်တို့ကလည်း ပြည်သူတွေနဲ့အတူ ရပ်တည်ပြီါ်ဆန္ဒဖော်ထုတ်ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဖြိုခွင်းမှုတွေနဲ့ အခက်အခဲတွေရှိနေတဲ့ကြားက လှုပ်ရှားမှုတွေကို ရဲရင့်တက်ကြွစွာပြုလုပ်ခဲ့ကြတဲ့ အနုပညာရှင်တွေတော်တော်များများ က လည်း ၅၀၅-က ဖြင့် […]
ငွေတွေဝင်လာခါနီးပြီးဆိုတာ သိနိုင်မည့်ရှေ့ပြေးနိမိတ် အိမ်မက်တွေ
အိမ်မက် အမျိုးမျိုးရှိပါတယ် အချို့ အိမ်မက်တွေက ရှေ့မှာဖြစ်လာတော့မယ့် အရာတွေကို နိမိတ်ပြတဲ့ အိမ်မက် မျိုးတွေရှိပါတယ်။ ဒီလိုအရာတွေကို မယုံကြည်တဲ့ လူမျိုးရှိနိုင်ပေမယ့် လက်တွေ့မှာ တကယ်လည်းဖြစ်ခဲ့ ရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ သာဓက တွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ ငွေတွေဝင်ခါနီးရင် ဘယ်လို […]
ရိုးးရိုးခါးနာတာနဲ့ ကျောက်ကပ်ကြောင့်ခါးနာတာကို ဘယ်လိုခွဲကြမလဲ
By Writer MagicPosted on April 15, 2021 April 15, 2021
ခါးအောက်ပိုင်းနာနေတာကြာပြီ။ ဟာ ဒါဆို ကျောက်ကပ်ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ စကားလေးတွေ ကြားဖူးကြမှာပါ။ ဒါက မှားနေတာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ ကျောက်ကပ်ပြဿနာရဲ့ လက္ခဏာတွေထဲမှာ ခါးနာတာပါတတ်ပေမယ့် အခြား ကျောက်ကပ်မဟုတ်ဘ ဲခါးကိုယ်တိုင်ဒဏ်ရာရနေလို့ ခါးနာတာတွေလည်း ရှိပါသေးတယ် …. ။ ဒီတော့ ကျောက်ကပ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ […]
တစ် နေ ကုန် လှုပ် ရှား ထား ရ လို့ ခြေ ထော က် တွေ ညော င်း ကို က် ခဲ နေ ရင်
By Writer MagicPosted on April 15, 2021
တစ်နေကုန်ပြေးလွှား နေရတဲ့ အခါ၊ (သို့) သက်သောင့် သက်သာ မရှိတဲ့ ဖိနပ် စီးမိတဲ့ အခါ၊ လမ်းလျှောက်များတဲ့အခါ၊မတ်တပ်ရပ် ရတာများတဲ့ အခါ သင့်ခြေထောက်ကြွက် သားတွေက ညောင်းညာကိုက်ခဲနေတတ် ပါတယ်။ ခြေထောက်တွေ ညောင်းညာနေတယ် ဆိုရင် […]
အိမ်မှာ အသုံးပြုနေပြီး မပေါ့ဆသင့်သည့် အဝတ်အစားတွေ ကြားထဲက ပရုတ်လုံး၏ အန္တရာယ်
ပရုတ်လုံးကို အင်္ဂလိပ်လို M o t hbal l s လို့ခေါ်ကြပါတယ်။ Moth ဆိုတာ အလွယ်ပြောရရင် အဝတ်တွေထဲမှာနေတဲ့ ပိုးကောင်လေးတွေပါ။ သူတို့ရဲ့အစာက အဝတ်မျှင်တွေ၊ သိုးမွှေးတွေဖြစ်လို့ အဝတ်တွေထဲမှာနေပြီး […]
တန်ခူးလ မွေးဖွားသူတို့အတွက် တစ်သက်တာ ဟောစာတမ်း…
တန်ခူးလ မွေးဖွားသူတို့အတွက် တစ်သက်တာ ဟောစာတမ်း… တန်ခူး လမွေးဖွားသူအများစုတို့သည် ပင်ကိုယ်စိတ်ဓါတ်အားဖြင့် အလွန်သဘောထားကြီးတတ်ကြပါသည်။ လွတ်လပ်ပေါ့ပါးစွာ နေတတ်သည်။ အမြဲတမ်း ကြည်လင်အေးချမ်းစွာ နေပြီး ပြုံးပျော်ရွင်မြူးစွာ ပြောဆိုနေတတ်သည်။ ဖြတ်ထိုးဉာဏ် လည်း ကောင်းပါသည် …။ ဟာသဉာဏ် […]
ကြိုက်နှစ်သက်သူတွေအတွက်တော့ အနံ့အလွန်မွှေးပြီး အရသာရှိလှတဲ့ ဒူးရင်းသီးဟာ အာဟာရဓာတ်တွေကြွယ်ဝစွာ ပါရှိတာမှန်ပေမယ့် အလွန်အကျွံစားသုံးတဲ့အခါနဲ့ တွဲဖက်မစားသုံးသင့်တဲ့ အစားအစာတွေနဲ့တွဲဖက်စားသုံးမိမယ်ဆိုရင်တော့ ကျန်းမာရေးအတွက် အန္တရာယ်ရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့လို့ ဒူးရင်းသီးနဲ့တွဲဖက်ပြီးမစားသုံးသင့်တဲ့ အစားအစာတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ (၁) ဒူးရင်းသီးစားသုံးပြီးတဲ့အခါနဲ့ မစားသုံးခင်မှာ အရက်၊ ဘီယာ၊ […]